कोरोनाले प्रभावित पारेका देशहरूमा भारत तेस्रो स्थानमा भए पनि एक हप्तादेखि कोरोना ग्राफमा भारत तीव्र गतिमा उक्लेको छ ।
विगत केही हप्तायता भारतमा हरेक दिन कोरोनाको नयाँ केस ५० हजारभन्दा बढी छ । भारतमा अहिलेसम्म संक्रमणको २२ लाखभन्दा बढी केस देखिएका छन् ।
मंगलवार विभिन्न राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको संवादमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत कोरोनाको मामिलामा सही दिशामा अघि बढेको बताए । विज्ञहरूले यसमा अनौठो माने ।
सही दिशामा अघि बढेको भए अन्य देश जस्तै भारतमा कोरोनाको ग्राफ किन फ्ल्याट नभएको त ?
न्युजील्यान्डमा कोरोना संक्रमण कम गर्ने सरकारको प्रयासलाई सबैतिर प्रशंसा गरिएको छ । त्यहाँ १०२ दिनपछि कोरोना संक्रमणको केस देखिएको छ ।
पाकिस्तानको कुरा गर्दा त्यहाँ संक्रमणको आँकडा कम भइरहेको छ । पाकिस्तानमा पाँच महिनापछि पहिलोपटक जिम, सैलून र रेस्टुराँमा मानिस देखिन थालेका छन् ।
संक्रमण रोक्नका लागि बन्द गरिएका स्थान सोमवारदेखि खोलिएको छ ।
पाकिस्तानमा कोरोना संक्रमणको केस दुई लाख ८० हजार कटेको छ । लगभग ६१ सय मानिसको मृत्यु भएको छ । तर जुन महिनापछि संक्रमणको केस कम हुँदै गएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा जर्मनी र दक्षिण कोरियाको प्रशंसा गरेको छ । भारत भने रिकभरी रेट र तुलनात्मक रूपमा कम मृत्युको आँकडाबाट अघि बढ्न सकेको छैन ।
भारतमा रिकभरी रेट ६८ प्रतिशत छ भने मृत्युको आँकडा ४२ हजारभन्दा अलिक बढी छ ।
प्रति एक लाख मृत्युको आँकडामा भारत ३.८ मा छ । पाकिस्तान, सिंगापुर, बंगलादेश र जापानमा यो आँकडा ३ भन्दा कम छ । भियतनाम र श्रीलंकामा त यो १ भन्दा पनि कम छ ।
कोरोनाको ग्राफ फ्ल्याट गराउने कुरा आउँदा अमेरिका र ब्राजिल जस्ता अत्यन्त प्रभावित देशमा पनि दिनदिनै हुने मृत्युको संख्या घटिरहेको छ ।
जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा कोरोनाबाट प्रभावित देशहरूको सूचीमा जम्मा चार देशमा कोरोनाको कर्भ फ्ल्याट हुन सकेको छैन । भारत त्यसमा सबभन्दा माथि छ । त्यसपछि कोलम्बिया, पेरु र अर्जेन्टिनाको नाम आउँछ ।
मार्च महिनामा पूर्ण लकडाउन लगाउँदा देशमा जम्मा ५०० केस थिए । कोरोना नदेखिँदा सरकारले के संक्रमण रोक्नु नि ? अहिले आँकडा बढिरहेको बेलामा भारतले लकडाउन लगाउनुपर्ने हो ।
मोदीले मार्च २४ मा तीन हप्ताको पूर्ण लकडाउन लगाउने घोषणा गर्दा महाभारतको युद्ध १८ दिनमा जितिएको अनि कोरोनाविरुद्धको युद्ध आफूहरूले २१ दिनमा जित्ने घोषणा गरेका थिए ।
भारतले पहिलो गल्ती नै त्यहीँ गर्न पुग्यो । सरकारले कोरोनालाई युद्ध त मान्यो तर लड्ने कुनै ठोस रणनीति ल्याएन । अनि सामान र हतियारको जोहो पनि गरेन । सरकारले विभिन्न थरी आदेश जारी गरे पनि त्यसको कुनै तर्क दिएन ।
भारतमा दिनदिनै संक्रमणको संख्या आगामी दिनमा झनै बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । भारतमा हरेक राज्यको कोराना पीक फरक फरक छ । प्रत्येक राज्यले आफ्नो स्तरमा कोरोना हराउन विभिन्न उपाय अपनाएकाले एकैचोटि सबै राज्यमा कोरोनाको पीक आउने छैन ।